Nycticorax nycticorax Scientific Nycticorax nycticorax
Nycticorax nycticorax [nycticorax or hoactli] Scientific Nycticorax nycticorax [nycticorax or hoactli] ssp group
Nycticorax nycticorax [obscurus or falklandicus] Scientific Nycticorax nycticorax [obscurus or falklandicus] ssp group
Nycticorax nycticorax cyanocephalus Scientific Nycticorax nycticorax [obscurus or falklandicus] ssp group
Nycticorax nycticorax falklandicus Scientific Nycticorax nycticorax falklandicus ssp.
Nycticorax nycticorax hoactli Scientific Nycticorax nycticorax hoactli ssp.
Nycticorax nycticorax hoactli Scientific Nycticorax nycticorax hoactli (hoactli) ssp.
Nycticorax nycticorax hoactli (hoactli) Scientific Nycticorax nycticorax hoactli (hoactli) ssp.
Nycticorax nycticorax hoactli (naevius) Scientific Nycticorax nycticorax hoactli (naevius) ssp.
Nycticorax nycticorax naevius Scientific Nycticorax nycticorax hoactli ssp.
Nycticorax nycticorax naevius Scientific Nycticorax nycticorax hoactli (naevius) ssp.
Nycticorax nycticorax nycticorax Scientific Nycticorax nycticorax [nycticorax or hoactli] ssp group
Nycticorax nycticorax nycticorax Scientific Nycticorax nycticorax nycticorax ssp.
Nycticorax nycticorax obscurus Scientific Nycticorax nycticorax [obscurus or falklandicus] ssp group
Nycticorax nycticorax obscurus Scientific Nycticorax nycticorax obscurus ssp.